Izindaba - Ithemba lokuhlanzwa kanye nokuvuselelwa kabusha kwabahlomisi
NgoJulayi 2017, uMnyango wangaphambili wezokuvikelwa kwemvelo walungisa futhi wafaka ohlwini izinhlobo ezingama-24 "zemfucumfucu yangaphandle" ezibandakanya imfucumfucu yephepha kanye nephepha lemfucuza kukhathalogi yokungeniswa okungavunyelwe kwemfucumfucu eqinile, futhi yaqalisa ukuvinjelwa kokungeniswa kwalezi "doti zangaphandle" kusuka ngoDisemba 31, 2017. Ngemuva konyaka wokuvutshelwa nokuqaliswa ukusebenza ngo-2018, umthamo wokungeniswa kukadoti wepulasitiki odoti wangaphandle eChina wehle kakhulu, okwaholela nasenkingeni yezinkinga zemfucuza eYurophu, eMelika, eLatin America, e-Asia nase-Afrika.
Ngenxa yokusetshenziswa kwalezi zinqubomgomo, igebe lokuphathwa kukadoti emazweni ahlukahlukene liyanda. Amazwe amaningi kufanele abhekane nenkinga yokulahla amapulasitiki kadoti nokunye ukungcola ngokwawo. Esikhathini esedlule, bezihlanganiswa bese zithunyelwa eChina, kepha manje sezingagaywa ekhaya kuphela.
Ngakho-ke, isidingo sokuhlanzwa kwepulasitiki nemishini yokuphinda isetshenziswe emazweni ahlukahlukene siyanda ngokushesha, kufaka phakathi ukuchoboza, ukuhlanza, ukuhlunga, i-granulation neminye imishini yepulasitiki, ezongenisa isikhathi esihle kakhulu sokuya phambili nesikhathi sokuqubuka. Ngokwanda kokuvinjelwa kukadoti wakwelinye izwe eChina kanye nokwenza ngcono ukuqwashisa ngokulawulwa kukadoti emazweni ahlukahlukene, imboni yokuphinda isetshenziswe kabusha izokhula ngokuqhuma eminyakeni emihlanu ezayo. Inkampani yethu iphinde isheshise ukukhiqizwa nokwenyuswa kwemishini enjalo Ukuze ihambisane negagasi lamazwe omhlaba futhi yenze uchungechunge lomkhiqizo wenkampani lubanzi.
Ekuhlanganisweni kwanamuhla komhlaba wonke, wonke amazwe axhumene kakhulu. Izinkinga zemvelo zezwe ngalinye nazo ziyizinkinga zemvelo zaso sonke isintu. Embonini yepulasitiki yokurisayikilisha, sinomthwalo nesibopho sokuqinisa imboni yeplastiki yokuphinda isebenze kabusha kanye nokuphathwa kwemvelo kwesintu. Ekhiqizweni kwemishini yethu, kodwa futhi nayo yonke imvelo, ake sibhekane nekusasa elihle futhi elihlanzekile.
Ngifisela abantu bezwe ngalinye indawo yokuhlala ehlanzekile nempilo engcono nengcono kuso sonke isintu. Ukukhula okunempilo, okungenankinga.